သို့ … ဦးဦးစည်ပင်သို့ .. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » သို့ … ဦးဦးစည်ပင်သို့ ..
သို့ … ဦးဦးစည်ပင်သို့ ..
Posted by ကထူးဆန်း on Feb 26, 2013 in Community & Society | 14 comments
ပျောက်သွားတဲ့ bus shelter
ဦးဦးစည်ပင် ကို သားသား ပြောချင်တာပြောလို့ ရမလား ဟင် ..
ဦးဦးက ဘာမှ ပြန်မပြောတော့ သားသား ပြောတာ ဦးဦးစည်ပင် စိတ်ဆိုးရဘူးနော် ..
ဦးဦးရေ ..သားသား ပြောချင်တာ ကြာပြီ .. ဖေကြီး က နောက်မှ နောက်မှ နဲ့ အချိန်တွေ ဆွဲနေလို့ ..
အချိန်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့ ဦးဦးရယ်..
ဒါပေမဲ့ သားသား မှတ်မိတာတော့ ကားလှလှ သစ်သစ် လေးတွေ ရန်ကုန် က လမ်းတွေပေါ်မှာ တွေ့လာရတဲ့ အချိန်နားမှာပေါ့ ဦးဦးရယ်..
သြော် ပြောဖို့ မေ့ နေလို့ ဦးဦးရဲ့ .. သားသားက ရွာမ ကျောင်းလမ်း နဲ့ ဘုရင်နောင်လမ်းမ ဆုံတဲ့ နားမှာ နေတာလေ ဦးဦးရဲ့ ။။
သားသားတို့ နားမှာ ရထားလမ်းကြီးလမ်း ရှိတယ်လေ .. အဲ့ဒီ့ နား အဲ့ဒီ့ နား ..
သားသား ဖေကြီး နဲ့ မမ က ကြည့်မြင်တိုင် က သဘောင်္တွေ နားက ငှက်ပျောဒိုင် ဆိုလား .. အဲ့ဒီမှာ အလုပ်လုပ်တယ် ဦးဦးရဲ့ ..
ညနေ ဖေကြီး နဲ့ မမ တို့ ပြန်လာခါ နီးတဲ့ အချိန် ဆို သားသား က လမ်းဆုံ နားက ဘတ်စ်ကားဂိတ် ကနေ သွားသွားစောင့်တယ် လေ ။ မေကြီးနဲ့ပေါ့ ..
ဘယ် ဘတ်စကား ဂိတ်ဆိုတာ ဦးဦး သိတယ် မဟုတ်လား ..
ဟိုလေ ဟိုလေ ဦးဦးရဲ့ .. အဲ့ဒီ့ ဘတ်စကားဂိတ် နားမှာ သားသား တို့ မြန်မာ ဘောလုံး အသင်းရဲ့ လူကြီး ပိုက်ပိုက်တွေ စုတဲ့ နေရာ ရှိတယ် လေ ..
ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် .. မြစ်ကြီးနံမည် နဲ့လေ .. အဲ့ဒီ့နားပေါ့ .. အဲ့ဒီ့ နားက ဘတ်စ်ကားဂိတ်ပေါ့ … ခုတော့ ဆီဆိုင်ကြီးလည်း ရှိတယ် ။။ နောက်ပြီး ကား သစ်သစ်တွေ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်ကြီးလည်းရှိတယ် … အဲ့ဒီ့ ကားဆိုင်ကြီးရှေ့ က ဘတ်စ်ကားဂိတ် ပေါ့ ..
အဲ့ဒီ့ ဘတ်စ်ကား ဂိတ်ကြီး အကြောင်းပြောချင်တာ ဦးဦးစည်ပင် ရဲ့ ။ ဘတ်စ်ကားဂိတ် ဆိုိတာ ဦး ဦး စည်ပင်တို့ ပိုင်တာ မဟုတ်လားဟင် …
ခုန သားသား ပြောတာ လေ .. ကားသစ်သစ် လှလှ လေးတွေ ရောက်လာ ကာစ ဆိုတာလေ ..
မေကြီး နဲ့ ဖေကြီး ကို သွားသွားစောင့်တယ် ဆိုတာလေ ..
ဟုတ်တယ် ဦးဦး စည်ပင် ရဲ့ ။အဲ့ဒီ့ ဘတ်စကားဂိတ် နောက်က ကားသစ်လှလှ ဆိုငိ် မရှိခင်ကဆိုရင်လေ သားသားတို့ ဖေကြီး နဲ့ မမ ကို သွားစောင့်လို့ မိုးရွာရင် မိုးခိုစရာ ၊ဘတ်စကားစောင့် တဲ့ အိမ် လေး ရှိတယ် ဦးဦး ရဲ့ ။ အဲ့ဒါ အဲ့ဒါ ပြောချင်တာ ။။
နေပူရင် အရိပ်ခို စရာ ၊ မိုးရွာရင် မိုးခို စရာ ဘတ်စကားဂိတ် စုတ်စုတ် လေး တစ်ခု ရှိခဲ့ တယ် ဦးဦးရဲ့ .. ဦးဦး မှတ်မိမှာပါ ..
ခုန သားသားပြောတဲ့ ကားသစ်လှလှ တွေ ရောက်လာကာစ မှာ အဲ့ဒီ့ ဘတ်စ်ကားဂိတ်နောက် က ခြံဝိုင်း ဟောင်းကြီး ကို ပြင်ပါလေ ရော ဦးဦးရယ် .. ဘာလုပ်တာလဲ ဆိုတာ သားသားတို့ တော့ သိဘူးပေါ့ ဦးဦးရာ ။
နောက် မကြာပါဘူး ဦးဦးရယ် ။။ သားသားတို့ မိုးခိုနေကျ ၊ နေပူ ရှောင်နေကျ ဘတ်စ်ကားဂိတ် အိုအိုလေးကိုလည်း အဲ့ဒီ့ လူကြီးတွေ ဖြုတ် ပြစ်လိုက်ကြတယ် လေ ။ပြီး ပလက်ဖောင်းကို လှလှပပလေး ပြန်ခင်းပေးကြတယ် ဦးဦးရဲ့ ။ မြက်တွေလည်း စိုက်၊ ပလက်ဖောင်း လှလှလေးပြန်ခင်းတော့ သားသားတို့လည်း ဘတ်စ်ကားဂိတ်ကို တစ်ခြား နေရာတွေမှာ လို ဟို ဖေကြီး ပြောတဲ့ မြန်မာပြည်က အချမ်းသာဆုံး သူဌေးကြီး စက်ရုံကထွက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ နဲ့ လှလှ လေး ပြန်ဆောက်မယ် ထင်နေတာပေါ့ ဦးဦးရယ် ..
သားသားတို့လည်း တစ်မျှော်မျှော်နဲ့ ပေါ့ ဦးဦးရယ် ။။ မိုးတွေ သဲသဲမဲမဲရွာတော့ အရင်လို ခိုစရာ နေရာ မရှိတော့လဲ သြော် ပြန်ဆောက်မှာပါ ။ အလှည့် မကျသေးလို့ နဲ့ တူပါတယ် ။ နေတွေ ခြစ်ခြစ်တောက်ပူ လာတော့လဲ ဘာမှ ထူးတာ မတွေ့တော့ မှ သားသား ဖေကြီးတို့လည်း သဘောပေါက်လာတယ် ဦးဦးရဲ့ ။
သူတို့ ကား လှလှ ဆိုင်ရှေ့မှာ ဘတ်စကားဂိတ် မထားချင်လို့ ဖြိုပြစ် ဖျောက်ပစ် လိုက်တယ် ဆိုတာ ။
အဲ့ဒါ အဲ့ဒီလို လုပ်လို့ ရလားဟင် ဦးဦးစည်ပင် ။ ဒါက အဲ့ဒီ့ ကားဆိုင်ကြီး မရှိခင်ကထဲ က သားသားတို့ ဆော့ နေကြ ၊ မိုးခိုနေကြ နေရာလေ ။ သူတို့ က သူဌေးကြီးတွေ မို့ သူတို့ လုပ်ချင်တာ လုပ်ပစ်လိုက်တာလား ဟင် ။ ဦးဦးစည်ပင်တို့ ကလည်း ဘာမှ မပြောဘူးလားဟင် ..
ဖေကြီး ကတော့ ပြောပါတယ် ။ ငါတို့ နင်းပြားတွေ သူတို့ လုပ်သမျှခံနေရတာ ဘဲ တဲ့ ။ ဟော ကားအသစ်တွေ အသီးသီးဝင်လာတာ မုဒိတာ ပွားချင်ပေမဲ့ ငါတို့ အတွက် ဘတ်စကား အသစ်တော့ ပါမလာ။ အနားမကပ်နိုင် တဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကား တွေ ဘဲ ပေါ။ အဲ့ဒီ့ကားတွေကြောင့် ငါတို့ ဘက်စုံ ဒုက္ခရောက်ရတယ် တဲံ့ ။ကားကြပ်လို့ အိမ်ပြန်နောက်ကျတာက တစ်မျိုး ၊ အခုလို ကား အရောင်းဆိုင်တွေကြောင့် တစ်မျိုး ၊ အမျိုးမျိုး မရိုး နိုင်အောင် ခံနေရတာဘဲတဲံ့။
ဘာတွေလဲ တော့ သားသား မသိပါဘူး ဦးဦးစည်ပင်ရယ် ။။
သားသားသိတာတော့ သားသားတို့ ဖေကြီး အလုပ်သွားရင် အလုပ်က ပြန်လာရင် နားခိုဖို့ ဘတ်စ်ကားဂိတ်လေး ပြန်လိုချင်တာပါဘဲ ။ ပြန်ဆောက်ပေးပါနော် ။ နော် ။ အခု ဆို ကမ်ဘာကြီး နေမကောင်းလို့ နေရောင်ချည်ထဲမှာ ဟိုဟို အင်္ဂလိပ်လို မြင်းခွာပုံနဲ့ ရောင်ချည်တွေ လဲ များနေတယ်တဲ့ ။ နေမကောင်းဖြစ်တတ်တယ် ပြောတယ် ။ သိလား ဦးဦး ။
နွေ လဲ ရောက်တော့မယ် ။ ပြီး ရင် မိုးတွင်းလည်း ရောက်တော့မှာ ။ အဲ့ဒီ့ အမီလေးတော့ သားသားတို့ ကို ဘတ်စ်ကားဂိတ် လေး ပြန်ဆောက်ပေးပါနော် ။ ဦးဦးစည်ပင်နော် ။
Bus Shelter ဖျောက်ဖျက် ခံလိုက်ရတဲ့ ဘတ်စ်ကား မှတ်တိုင် မှာ ဘတ်စ်ကား စောင့်မျှော်နေသူများ
ရွာမ ကျောင်းလမ်းနှင့် ဘုရင့်နောင်လမ်းထိပ် မှ Bus Shelter မဲ့သွားရှာတဲ့ မှတ်တိုင်
(လွန်ခဲ့ သော တစ်နှစ်ကျော် ကတည်း က Bus Shelter အဖြို ခံလိုက်ရတာ ၊ ပြန်ဆောက်မပေးတာ သတိထား မိ ခဲ့တာပါ ။ အခု မှ ဘဲ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ဘာမှ မဆိုင် ။ ဘကြီးနွား ထ ကျောင်းလိုက်တာ ပါ )
သြော် သားသားရယ် ဆောက်ပေးမှာပေါ့ကွယ် .
ခေတ်ကြီးက အရင်နဲ့မတူတော့ဘူးလေ ဘယ်ဟာမဆို ရွာလမ်းလေး ကျောက်ခင်းတာကအစ လွှတ်တော်ကိုတင်ပြနေရတာမို့ လွှတ်တော်မှာလည်း ဖြေရှင်းရမှာတွေ အတည်ပြုရမှာတွေ ဆန္ဒခံယူရမှာတွေက များမှများဆိုတော့ သားသားတို့အလှည့်က ခဏစောင့်နော်
အခုလောလောဆယ် ကျည်ကာကား(Bullet Proof) ငါးစီး
နဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ကားတွေ ၀ယ်ဖို့ ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၈၀၀၀ ကျော် လျာထားတဲ့ကိစ္စဆွေးနွေးနေတုန်းမို့ပါ ၊ သြော် ကားတွေကလား
Toyota Camry XLE Model 2012 အစီး ၅၀၊ B6 Armored sedan based on Mercedes S500L (V221) (Bullet Proof) ငါးစီး၊
Mercedes Pullman Model 2012 နှစ်စီး၊ Mercedes S350 Bluetec Model 2012 အစီး ၄၀၊ Audi A-6 Model 2012 အစီး ၃၀ ပါကွယ် ၊
အဲဒါတွေ အဲဒါတွေပြီးရင် သားသားတို့ သာမန်ပြည်သူတွေဘက် လှည့်လာလိမ့်မပေါ့ကွယ် ၊
သားသားကို တစ်စီးလောက် ပေးပါလား ဦး .. အဲဒါဆို ဂဇက်မှာ များများ အော်လို့ရသွားပြီ… :hee:
ကိုထူးဆန်းပြောတဲ့ နေရာက ရွာမကျောင်းလမ်းနဲ့ ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံတဲ့ နေရာ .. အဟိ … ကားတွေ အချင်းချင်း ခဏခဏ ဂျိုစောင်းသွေးတဲ့နေရာလေ .. ၊ အဲ့နေရာမှာ မှတ်တိုင်က ခု လုံးဝမရှိတော့တာ ဟုတ်တယ်… ဒါပေမယ့် အဲ့လို မဖြုတ်သွားခင်က … မှတ်တိုင်ကို ဘယ်ကား ၀င်အောင်းသွားလဲ မသိဘူး .. ပက်လက်တောင်လန်နေတယ် .အကျိုးကျိုးပဲ့ပဲ့နဲ့ .. အဲ့ဒါပြီး ဖြုတ်သွားကတည်းက ပြန်ကို မတပ်တော့ဘူး … ။
ဘုရင့်နောင်လမ်းအတိုင်းလာတဲ့ ကားတွေ တခါတလေ အဲ့မှတ်တိုင်မှာ မရပ်ချင်ဘူး … ရွာမကွေ့ကနေ ဖြတ်ထွက်တဲ့ ကားတွေကို ပြန်စောင့်ရမှာ စိုးလို့ပေါ့လေ … ။ အဲ့နေရာက .. ခဏခဏ +++ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်တဲ့နေရာပါပဲ …. ။ ဟိုးတလောကလည်း ကွန်တင်နာ ပေ20 ကြီး တုံးလုံးကို လဲလို့ … ။
နိုင်ငံတော်သူဌေး လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ မြို့ တော်ဝန်တောင်မှ
အော် …ကြရမယ် ဗျို့ 
etone ပြောသလို ကားတိုက်တာ ဆိုရင်တောင်မှ တော်တော် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဘဲ ။ အနောက် က ကားShowe Room အတွက် ပြင်ဆင်တော့မှ ဘဲ တိုက်သွားလား မသိ ..
ကျွန်တော် သတိထားမိသလောက်တော့ ကားshow room အတွက် ကာထားတဲ့ ခြံစည်းရိုးလည်း ဖြိုရော ။ အဲ့ဒီ့ ကားမှတ်တိုင်လည်း အဖြုတ်ခံရတာ ဆိုတော့ .. ကား show room က သူ့ ရှေ့ကာနေတဲ့ ရုပ်ဆိုးပန်းဆိုးကို တစ်ခါထဲ ဖြုတ်ချ ပလက်ဖောင်းလုပ်ပေးပြီး နေရာ ရွှေ့ ဖို့ ကြိုးစား တယ်ထင်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ့ နောက် ပြန်ကို မဆောက်တော့ ဘဲ ဘတ်စ်ကားစောင့် နေသူတွေခင်ဗျာ မိုးထဲ နေထဲ အမြဲ တွေ့တွေ့ နေတာ နဲ့ ဖွကြည့်တာ ပါ ..
အဟီး .. ထန်းသီးကြွေခိုက်ကြီး နင်းခိုက်နဲ့ … ချော်လဲရောထိုင်နှစ်ခု ပေါင်းပစ်လိုက်တာဖြစ်မယ် ကိုထူးဆန်းရဲ့ …. ။
ကားမှတ်တိုင်ကြီး ပိန်လိန်နေတုန်းကတော့ လေးငါးရက်လောက် ဒီတိုင်းထားသေးတယ် … နောက်က ဟာကြီး ပြီးသွားတော့ သူလည်း ပျောက်သွားတာပဲ .. ညကတောင် အဲ့က ဖြတ်ပြန်တော့ … သတိတရ ကြည့်ခဲ့မိပါသေးတယ် … မီးရောင်ထဲက ကား showroom ကြီး ဖိတ်ဖိတ်တောက်လို့ ။
ကထူးဆန်းရယ် နေ၀န်းနီတို့ဆီမှာတော့ အမှိုက်မသိမ်းပဲနဲ့ အမှိုက်ခွန်ဆောင်နေရတာ မြို့သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးပါပဲ…။ (30-11-1958 မှမြို့ဖြစ်လို့သာပေါ့ နို့မို့ဆို ……….. )
ဒီလိုနဲ့ ကိုယ့်အိမ်က အမှိုက် ကိုယ့်ဖာသာတာဝန်ယူ အိမ်ရှေ့ တစ်နေရာ ဒါမှမဟုတ် အိမ်ဝန်းကျယ်တဲ့သူက အိမ်ဝင်းဒေါင့်တစ်နေရာမှာစုပုံ ပြီးမီးရှို့ အမှိုက်ကားမျှော်ရတဲ့ပြဿနာနဲ့ကင်းဝေးနေပါကြောင်း
အဲဒါ သူဌေးတွေနဲ့ ပေါင်းရိုက်ထားတဲ့ သက်သေခံပဲ
အဲဒီတော့ သားသားကတော့ ခဏ နေပူခံ မိုးရွာခံလိုက်ပါကွယ်…
တနေ့မှာ … မကြာတော့တဲ့တနေ့မှာ သူဌေးတွေဆီက အရိုးအရင်းကိုက်ရဖို့
ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားကို ဖျက်ဆီး စတေးခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်တွေကို
သားသား ဖေဖေရော သားသားမေမေရော သားသားရဲ့ ကိုကို မမတွေကိုရော
နစ်နာအောင် ပြုခဲ့သူတွေကတော့ မေ့သွားနိုင်ပေမယ့်
သို့ သားသားရေ ….
မနေ့ကပဲ သားသားရဲ့စာကိုဖတ်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးဦးစည်ပင်ကြီးမူးပြီးပြဲနေတာနဲ့ စာမပြန်နိုင်တာခွင့် လွှတ်ပါကွယ်။ ငါး ဂရိတ် ကြီးက ပိုက်ဆံလေးပေးပြီးဖယ်ခိုင်းတာနဲ့ ဖယ်လိုက်ရတာပါကွယ်။ အဲ့တုန်းကလဲ ဦးဦးရဲ့မယားငယ်လေးက ကားစီးချင်လို့ပူစာတာနဲ့ အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါကွယ်။ ခုနေမှ ဦးကပြန်ဆောက်လိုက် ရင် ဦးကိုသူတို့က ဘွတ်ဆမံ ကျွေးတော့မှာပေါ့ကွယ်။ သားသားစောင့်ရတာနေပူရင် သားသားအဖေ ကိုညမှောင်မှပဲ ရုံးကပြန်လာခိုင်းပေ့ါသားသားရယ် … ဒါလေးများ။ မိုးတွင်းရောက်လို့ မိုးရွာ ရင်လဲစိုမှာမကြောက်ပါနဲ့ကွယ် သားအတွက် နှစ်ထောင်တန် ထီးတစ်လက် ဦး ၀ယ်ပေးပါ့မယ်။
မိုးရွာပြီဆိုတာနဲ့ ဦးဆီမှာထီးလာယူလိုက်နှော် သားသား။
အဲသလိုနဲ့ပဲ ပြည်သူပိုင်တွေ ပျောက်ပျောက်သွားကြ။
မေ့တတ်တဲ့ကျမတို့ကလည်း ဒီနေရာ ပြည်သူပိုင်မှန်းတောင် မမှတ်မိတော့။
အဲ့လို မျိုး ဘတ်စ်ကား ဂိတ် လေးတွေ လိုက်ဆောက် ပေးပြီး ကြေညာ လက်ခံ ရ ကောင်းမလား . . . . . . ။
စဉ်းစား မိတာလေးပါ . . . မြေငှားခတော့ ပေးရမယ်ထင့် . .
ကားမှတ်တိုင်က Bus Shelter မဲ့သွားရှာတဲ့အပြင်
၆စီး ၇စီး ဘေးချင်းယှဉ်ပီးတိုးနေကြတာ..အသဲယားစရာဗျာ..